Wyndham Mahotera & Resorts maratidziro Ekushambadzira Maki muLatin America
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Wyndham Mahotera & Resorts maratidziro Ekushambadzira Maki muLatin America
Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Wyndham Hotels & Resorts, imwe hotera inobhadharisa hotera ine angangoita 9,200 emahotera kupfuura nyika makumi masere, nhasi yazivisa kuuya kweChiratidzo Chayo Chekutengesa neWyndham soft-brand kuLatin America neCaribbean pamwe nekuwedzera kweCosta Blu Beach Resort muBelize.
Inowanikwa mamaira manomwe kuchamhembe kweSan Pedro Town pane inoyevedza Ambergris Caye, yakasarudzika, 38-suite, vanhu vakuru-chete beach-kumberi nzvimbo yekutandarira iri mune imwe yenzvimbo dzinotsvakwa zvakanyanya mushure mezororo nzvimbo uye iri kumahombekombe kweBelize Barrier Reef, yechipiri pakakura yezvipingamupinyi pasi uye UNESCO World Heritage Site. Iyo nzvimbo yekutandarira ndeyaSandy Point Boka uye ichatarisirwa neWyndham Hotels & Resorts, ichiita iyo yekambani 26 nzvimbo inochengetwa mudunhu iri.
Alejandro Moreno, Wyndham Hotels & Resorts purezidhendi uye maneja mukuru weLatin America neCaribbean akati: “Nendege dzisingamiri kubva kumaguta 17 munyika nomwe, panhandare nomwe dzenyika dzakawanda, kusvika kuBelize hakuna kumbove kuri nyore. Zvakare, nhamba dzichangoburwa dzakaburitswa neBelize Tourism Board, dzinoratidza kuti mari inowanikwa munzvimbo dzekugara yakawedzera gore rega rega mumakore manomwe apfuura. Tichifunga hupfumi hwemukana, tinofara kuvhura chiratidzo chedu chekutanga chinotarisirwa munzvimbo isiri yakanaka chete asi iri kukura mukuda. ”
Iine anopfuura anodarika zana mahotera pasirese, Chiratidzo cheMaki neWyndham muunganidzwa wepamusoro-wepakati uye pamusoro pezvivakwa. Pakati peimwe emamwe mahotera akakurumbira muunganidzwa iIINFINITY Hotel & Musangano Wenzvimbo muMunich, Germany, iyo HYPERION Hotel Basel muBasel, Switzerland, pamwe nenzvimbo dzinozivikanwa dzeAmerica senge Galt House Hotel muLouisville, Ky., Ravel Hotel muLong Island City, NY, uye Zermatt Utah Resort & Spa muMidway, Utah.
Costa Blu Beach Resort, Chiratidzo Chekutengesa neWyndham hotera, ndeyevakuru-chete uye inopa vashanyi chiitiko chakasarudzika apo runyararo, zororo uye zororo ndizvo zvinonyanya kukwezva.
"Tiri kufara kwazvo kuve takabatana neWyndham Hotels & Resorts kuunza zita rinozivikanwa pasi rese kuBelize nedunhu," akadaro Mary Dahlquist, mukuru wevashandi weSandy Point Group. "Nemabatiro avo epasi rose, chirongwa chekuhwina mibairo uye ruzivo rwakakura rwehotera uye nzvimbo yekutandarira, tine chivimbo chekuti kudyidzana nesangano repasi rese seWyndham hakungosimudzire Costa Blu Beach Resort chete asiwo kutibatsira kutyaira zvakanyanya vafambi kupota nyika. ”